Gloxinia Sonata: nkọwa mkpụrụ osisi nke ifuru na ụdị dị iche iche, iwu maka ịkụ ihe na ilekọta osisi, ihe dị iche iche nke mmepụta na ọrịa - Ụlọ, ụlọ - 2020
Decorative Gloxinia Sonata. Kedu ka esi eto na ulo?
Okpokoro okooko osisi na ornamental gloxinia epupụta na-adọrọ mmasị mgbe nile nke ndị na-azụlite ndị na-azụlite ụdị ọhụrụ na adọ ụdị ụfọdụ.
Nkọwa nke gramophone nke velvety nke agba agba gbara gburugburu na usoro a dị iche iche ga-adị mkpa na ụlọ ọrụ, ụlọ, na windo nke ụlọ obodo.
Ụdị dịgasị iche iche nke Gloxinia Sonata, bụ nke a ga-atụle n'okpuru ebe a, na-emetụtakwa ụdị ndị ọhụrụ.
Isiokwu a ga-eleba anya iji lekọta okooko osisi a, yana ikwu banyere atụmatụ nke mmepụta ya.
Ụdị na atụmatụ
Ebee na esi esi kụọ osisi?
Iru mmiri na ịgbara
Ọrịa a na-ahụkarị na pests
Osisi yiri ya
Gloxinia (Gloxinia) - osisi ogwu osisi ma ọ bụ osisi shrub osisi nke Gesneriyev (Gesneriaceae). N'elu ọdịdị, ọ na-anọchite anya ógbè ndị dị n'akụkụ osimiri, na ọdụm nkume, na mmiri na-asọ oyi, ọhịa ọhịa na-ekpo ọkụ nke South na North America.
Gloxinia bu ụzọ kọwaa na narị afọ nke 18 site n'aka onye Alsatian bụ Benjamin Peter Gloxina, bụ onye hụrụ otu ifuru na Brazil. Onye na-ahụ maka ihe okike kpọrọ ya aha ya, na-agbakwụnye ihe a na-akpọ "speckled."
Ihe ịrịba ama kachasị mkpa nke gloxinia:
Ọtụtụ n'ime ime ụlọ gloxinia tuberous osisi. Na tuber ahụ buru ibu (nke ruru 40 cm n'obosara), nke gbara ya gburugburu, nke na-egbuke egbuke.
Buru obere oge, ma ọ bụ dịtụ ala.
Akwụkwọ ndị ahụ dị oke, anụ ahụ, kemmiri, ọkụ ọkụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọlaọcha, na elu ụlọ.
Ala nke akwụkwọ ahụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọbara ọbara ma ọ bụ odo odo. Ọnọdụ ahụ bụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụ na-adịghị mma. Mpempe akwụkwọ oval ma ọ bụ elongated. Nwunye dịgasị iche site na 1 cm ruo 20 cm. Petiole thickened, ok. Ọpụpụ dị elu site na 2.5 cm ruo 30 cm.
Ihe ndị a na-eme ka ọ bụrụ otu iko, olulu, mgbịrịgba, gramophone, gọọmenti, ma ha niile nwere ọnụ ọnụ na otu elongated tube nke ise petal tubular corolla kewara ya na stamens ise, anọ anthers na ogologo pestle.
Okooko osisi buru ibu (8-12 cm n'obosara), dị mfe, ọkara abụọ na okpukpu abụọ, nke a na-ejikọta ya na nke dị nro.
Na otu osisi nwere ike isi na-eto eto site na 1 ruo 20 okooko osisi. Ụdị agba dịgasị iche iche, ewepu edo edo na aja aja. Oge okooko osisi site na mmalite oge opupu ihe ubi ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Mkpụrụ osisi ahụ bụ igbe dị na cone na ọtụtụ obere osisi.
Ndị na-asụ botanists na-agụ site na 20 ruo 25 ụdị gloxinia, ma ọ bụ nanị ụdị na ụdị ịdọrọ mmiri na-adabere n'ụdị dị iche iche na ụdị ha dị iche iche na-eto eto dị ka ihe a kụrụ n'ubi: speckled gloxinia, royal syngia, mara mma blue syngia, terry gloxinia.
Gloxinia Sonata bụ usoro dịgasị iche iche nke ụdị hybrids bred na ndabere nke ebube Gloxinia. Ọ na-egosipụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke pink, odo odo ma ọ bụ uhie uhie na otu osisi, mpempe akwụkwọ rosette.
Ụdị ndị a kacha mara amara.
Ọ nwere okooko osisi na-acha odo odo na-acha odo odo-violet akpịrị dị ka nke iko na akwa na-acha ọcha lilac-ọcha na ókèala lilac.
A ngwakọ na ifuru na akpịrị jupụtara coral-pink na ọcha na pink petals.
Ụyọkọ pink pink, abụọ-ụda ifuru akpịrị, karịa pink pink ma ọ bụ pink uhie, ude n'okpuru na udara specks.
Nnukwu uhie uhie.
N'ụlọ ahịa akwụkwọ nri, ị nwere ike ịhụ Sonata gloxinia osisi na "mix". Nke a abụghị ụdị dịgasị iche iche, ma ngwakọta nke ụdị ụdị dịgasị iche iche na okooko osisi dị iche iche.
N'ụwa e nwere ọtụtụ ụdị gloxinia ọzọ, anyị na-ekwu banyere ha n'ụzọ zuru ezu ebe a:
Kaiser Wilhelm na Friedrich.
Curly liana - Gloxinia lofos.
A pụrụ ịkụzi Gloxinia n'ọtụtụ ụzọ., ma ihe kachasị ya bụ ịkụ mkpụrụ tuber.
A kpochapụrụ tuber ahụ n'ala, mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ. Akwụsịghị ya na mpempe pink ngwọta nke potassium permanganate, tinyere na ngwọta nke ibu stimulator maka ime ụlọ. Mgbe ntanye, jide n'aka na ihe ngwọta ahụ agaghị adaba na olulu mmiri nke tuber.
Maka ịke ịhọrọ ite na-emighị emeri. N'ihi na ndị na-eto eto na-ejikarị eriri nke 7-10 cm, n'ihi na ndị okenye - 11-15 cm N'etiti mgbidi nke ite na tuber hapụrụ ọdịiche nke ihe dịka 3-5 cm.
A na-awụnye oyi akwa drainage n'ime ite ahụ, obosara ya kwesịrị ịdị ka 1/3 nke elu tank.
Wunye ngwakọta ala ma ọ bụ ala mere ka ọ dị ala maka osisi okooko osisi, nke dị mma.
A na-etinye tuber ahụ n'ime olulu na-ekpuchi elu ala ahụ, fesa ya na mbara ala nke centimeter.
A na-etinye seedling na pan na mmiri, kpuchie ya na akpa rọba, tinye ebe dị mma, na-echekwa okpomọkụ + 22-25 ºC. Osisi a na-emepụta kwa ụbọchị maka minit 10-15.
N'ibute ezi akwụkwọ abụọ, a na-emeghe n'elu ngwugwu ahụ maka acclimatization nke seedlings. Mgbe 3-4 ụbọchị a napụrụ kpamkpam ụlọ ahụ.
Na toro-elu osisi ifesa a tuber na 1-2 cm.
Mgbe osisi ahụ nọ na ngwugwu ahụ, a dịghị enye ya mmiri ma ghara itinye mmiri na pan. Osisi nwere mmiri zuru oke na-eme n'oge akuku. Mmiri dị elu nwere ike iduga na ire ere tuber.
N'ihi na gloxinia ahọrọ ebe nwere ezigbo ọkụ ọkụ. Kasị mma na window windowsill oriented n'ebe ọdịda anyanwụ ma ọ bụ n'ebe ọwụwa anyanwụ. Mgbe a na-ahụ na windo ndịda, osisi ahụ chọrọ ịmachi, na edere - ọkụ ọzọ.
Maka Sonata bụ ala acidic na acidity index nke pH 5.5-6.5. N'ọnọdụ ụlọ, a kwadebere ngwakọta site na akwukwo ala, peat, ájá ájá ruru: 1: 1: 1/2.
Dị ka ọtụtụ osisi tuberous, oge nke uto na-arụsi ọrụ ike nke gloxinia gbanwere oge ezumike. E kwesịrị ịtụle atụmatụ a mgbe ị na-ahapụ.
N'ime oge na-eto eto na okooko, a na-echekwa okpomọkụ kwa ụbọchị na + 20-22 ºC, n'abalị banyere + 18ºC. N'oge oge fọdụrụ + 10-14ºC. Na ntinye akwụkwọ na mgbanwe dị egwu na okpomọkụ, osisi ahụ na-agba agba ma na-ala n'iyi.
Mmiri dị elu nke ikuku n'ime ụlọ bụ 70-80%, na-ekweghị ka ala karịa pasent 50. Enweghị mmiri mmiri na-egosi na ọ na-eme ngwa ngwa na-eto eto ma na-agbachi agba nke akwukwo akwukwo na ala. Iji mepụta ọnọdụ dị mkpa, a na-etinye osisi ahụ na pan nke mmiri ma ọ bụ akpa, nke a na-eme ka ọ bụrụ nke a na-agbanye mgbe niile. Enweghị ike igosi Gloxinia. Mgbe mmiri na-esi na epupụta apụta edo edo-aja aja.
A na-emegharị mmiri site na pan ma ọ bụ n'akụkụ ọnụ nke ite ahụ na mmiri dị nro dị iche iche nwere okpomọkụ nke 2-3 degrees n'elu ụlọ okpomọkụ. Ala kwesịrị ịdị na-adịkarị mmiri mmiri, mmiri ejighị mmiri na-adịghị mma. Ọkara awa mgbe a gụsịrị mmiri, a na-awụpụ mmiri na-esi na pan.
N'oge oge uto ahụ, a na-agba mmiri ahụ ugboro abụọ n'izu. N'igwe ojii na mmiri ozuzo, mmiri na-erughị ala mgbe mgbe. N'oge oge ezumike, ọ fọrọ nke nta ka mmiri kwụsịrị, na-agba osisi ahụ ọkụ ugboro atọ na atọ iji gbochie ụwa ka ọ ghara ihichapụ.
Nke mbụ 1.5-2 ọnwa mgbe akuku fertilizing adịghị achọrọ. N'ime oge ọrụ, a na-eri osisi ahụ na ọ dịkarịa ala ugboro anọ kwa ọnwa, na-eme ka nri fatịlaịza na-agbanwe agbanwe. N'oge oge ezumike, a dịghị etinye fatịlaịza.
Site na ịhapụ osisi ahụ site na "ọkụ", mgbe ọ na-eto na tuber nke akwụkwọ ọhụrụ, a na-atụgharị tuber n'ime ite ọhụụ nke nwere 2-3 cm karịa nke gara aga.
Gloxinia na - eji ọrịa ndị na - ekpo ọkụ n'ime ime ụlọ:
ihe na-edozi ahụ.
Ọ bụrụ na emeghị mgbochi na oge, pests nwere ike ime ka nsogbu ghara imerụ ahụ:
cyclamen na agba uhie uhie;
Gloxinia gbasaa site na mkpụrụ na ụzọ vegetative: nkewa nke tuber, akwukwo na mkpuru osisi, akwukwo.
Maka Sonata gloxinia, nke sitere na ngwakọ, usoro mkpụrụ nke mmeputakwa adịghị adaba, n'ihi na àgwà varietal mgbe mkpụrụ osisi na-agbasa, ọ ka mma iji usoro vegetative:
Iji nweta akwukwo akwukwo ahihia akwukwo akwukwo ozo n'oge budding ma obu okooko. A na-eji mmiri dị 1-1.5 cm mikpuo mmiri ahụ. Mmiri adịghị agbanwe agbanwe, kama ọ gbakwunyere ka ọ na-ekpochapụ. Mgbe ọdịdị nke nodule dị, a na-akụ ya n'ala, na-amụba site na 2-2.5 cm.
Ọ bụrụ na, mgbe ịmalitegharịrị tuber ahụ, ọtụtụ ome mpempe akwụkwọ ahụ amalitewo, ndị ọzọ na-agbapụta, na-ahapụ 1-2 nke ndị kasị sie ike. A na-agbanye mgbọrọgwụ ma kụọ kwa dị ka akwụkwọ osisi.
Maka mmeputakwa site na efere mpempe akwụkwọ nwere mma dị mma belata nnukwu mpempe akwụkwọ dị na rosette. N'ebe dị n'ime, a na-etinye ihe ndị na-agagharị n'okirikiri kachasị na ebe ndị a na-ekpuchi. E debere mpempe akwụkwọ ahụ n'elu ala na-ekpo ọkụ, bụ nke a na-etinye n'ebe ndị a na-etinye aka, kpuchie ya na fim. Mgbe ọdịdị nke mgbọrọgwụ, nhazi nke tubers, akwukwo nwere ike gbanye mgbọrọgwụ.
Mgbe a na-azụlite site na nkerisi tuber ahụ, a na-egbutu ya n'ime iberibe ka onye nke ọ bụla wee nwee mkpokọta buds isii ma ọ bụ Ome. A na-erechapu oku na unyi, debere ka ọ kpọọ nkụ n'ime ebe gbara ọchịchịrị ruo ụbọchị 2-3, kụrụ.
Gloxinia Sonata dị ka omenala ụlọ:
Streptokarpus bụ onye ikwu Gloxinia si n'ezinụlọ Gesneriev. Osisi herbaceous osisi na-eto eto na-enweghị osisi, site na 5 ruo 30 cm elu.
Onye nnọchiteanya nke Gesnerievs - Ahimenez. N'ihi na elongated pubescent na ndị mmadụ na ọ na-akpọ "nettle".
Osisi ọzọ si n'ezinụlọ Gesnerievs bụ Koleria. Osisi ya bụ velvety, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Okooko osisi na-eme ka mgbịrịgba elongated, gbanwee mgbịrịgba na nnukwu petals dị iche iche dị iche iche.
Campanula yiri Gloxinia ifuru udi. Ndị na-ese onyinyo dị iche iche.
Pelargonium eze ma ọ bụ geranium ma ama maka nnukwu okooko osisi dị iche iche. O nwere ebe oval nke okpukpu di iche n'etiti etiti ahu, nke naenye ya anya mara nma.
Gloxinia Sonata anaghị achọ nlekọta pụrụ iche ma chọọ icho mma n'ime ime.